Smart multi-Functional Lighting Pole mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > Smart Street Light > Smart maro Functional Lighting Poloney > Smart multi-Functional Lighting Pole
Avy amin'ny fomba fijerin'ny jiro, inona no fiasa tokony handrakotra jiro?
1. Ny fandrefesana ny tariby herinaratra toa ny ankehitriny sy ny herin'ny jiro eny an-dàlambe, ny fanamorana ny jiro eny an-dalambe, ary ny fiasa eny an-toerana amin'ny fizarana manan-danja amin'ny fijerena lavitra.
2. Hanara-maso ny mari-pandrefesana lampin-jiro LED amin'ny mari-pana na ny mari-pana amin'ny jiro sy ny fandalinana ny fahadisoana.
3, ny hazavan'ny andro na ny fanentanana ny olombelona dia mihamalemy, ary koa ny fifehezana ny fotoana amin'ny fifehezana angovo ary hanjary fanina RTC ihany koa.
4. Araka ny angon-drakitra fanaraha-maso ny jiro, fantaro tsara ny toerana misy ny jiro tsy ara-dalàna sy ny antony tsy mahazatra, ary manana tanjona hanamboatra, tsy handeha any an-tanàna hijerena, hanafaingana ny fikojakojana sy hampihenana ny vidin'ny fikojakojana.
5. Ny haavon'ny hazavana jiro amin'ny lalana iray ihany dia miova ny fotoana sy ny fandehan'ny fifamoivoizana. Ohatra, ny lalana fampandrosoana vaovao sasany dia mety manana hazavana ambany kokoa eo am-piandohan'ny andalana. Aorian'ny fotoana na amin'ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny fifamoivoizana dia mihodina ny tokana iray. .
6, any amin'ny olona sasany ao amin'ny faritra milentika anelanelan'ny alina, dia azo fehezina amin'ny antsasaky ny mazava, fa rehefa mandalo ny fiara dia tonga amin'ny halavirana iray manokana eo alohan'ny hazavana feno, ary ny aoriana dia miverina amin'ny hazavana tany am-boalohany aorian'ny segondra vitsy
Ny tanàna manan-tsaina dia tsy vitan'ny hoe andian-dalambe eny amin'ny habakabaka na voafetra ho amin'ny fizaram-panadinana kely. Ny tombontsoa azo avy amin'ny 5G dia mitondra tambajotra matotra sy ny fanovana an-tanandehibe dia hita ary azo antenaina. Na izany aza, ny fanodinana ireo poleta maivana mavesatra dia tsy maintsy hamaha ny olan'ny vanim-potoana fananganana foto-drafitrasa. Mila mifanampy koa amin'ny teknolojia 5G sy tontolo iainana ara-barotra matotra mba hahazoana vokatra manankarena.
Hot Tags: Smart multi-Functional Lighting Pole, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style
Lighting polemanan-tsaina jiro pole